Dhangii - Mataduree - MatadureeIjoo - Hiriira caancalaa Dhangii - Man'eewwanii - Hiriira cancalaafiladhu
Baafata haalqara irrantoo tarjaa, gabattee kussaa deetaa kessaa fili - cancala Dhangii Tarjaa - Hiriirafili
Lakkoofsa gara mirgaa fi barruu gara bitaatti hiriirsa.
Yoo dirqallii Durtii filatame, lakkoofsotni gara mirgaatti hiriirfamuu kan danda'aniif barruun bitaatti qixxeeffame.
Qabeentota man'ee gara bitaatti hiriirsa.
Qabeentota man'ee gara mirgaatti hiriirsa.
Qabeentoota man'ee dalgata handhuressa.
Qabeentota man'ee gara bitaatti fi mirga handarawwan man'ee hiriirsa.
Qabeentota man'ee(lakkoofsa fi barruu) hanga bal'inni mul'ataa man'ee guutee irra deebi'a.Amalli kun barruu sarara citaa qabate irratti hin hojjetu.
Qabeentota man'ee gara qarree gubbaa man'eetti hiriirsa.
Qabeentota man'ee gara qarree gadii man'eetti hiriirsa.
Qabeentoota man'ee olgata handhuressa.
Gidduu Sarjina Hiriirsuu
Qaabachisa barruu qabeentota man'ee qindeessa.
Dheerina barruu handaara man'ee xixiqqaa irraa: Barruu nanna'e irraa qarree man'ee jalaa gara alaatti barressa.
Dheerina barruu handaara man'ee gubbaa irraa: Barruu nanna'e irraa qarree man'ee gubbaa gara alaatti barressa.
Dheerina barruu man'eewwan keessa: Barruu naanna'e qofa man'ee wabiin barreessa.
Barruu Olgata hiriirsa.
Haalata Teessuma Eeshiyaa
Yaa'insa barruu man'ee keessaa adda baasa.
Barruu ofumaan dangeessi
Hammaamtaa man'eef taasisuuf suntuursi
Hammamtaa isa bocquu hir`isi qabeentotaa man'ee yabbina man'ee ammmee keessatti taasisa. Ajaja kana man'ee kutaa sararaa qabateetti fayyadamuu hin dandeessu.
Title is: Hiriira